Site na njikwa njikwa ọdịnaya, ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-eche ihe ndị a niile dị ka ụdị 'mmepụta'. Nke ahụ bụ echiche nzuzu. Ọ dịka ịlele Direct Mail na Akwụkwọ Mgbapụta otu ihe n’ihi na ị jiri otu akwụkwọ ahụ n’ebe abụọ ahụ.
RSS bu teknụzụ 'na-adọpụta', ọbụghị 'na-agbanye'. Usoro nnyefe dị na mma nke ndị ahịa ọ bụghị ahịa. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ịnwepụta oge ma ọ bụ ga-ahụ ọdịnaya nwere ike ịka mma karịa na ebubata ya site na email karịa RSS. Ọ dị mfe iji tụọ ndị debanyere aha na wepu aha site na email, mana ọ naghị adị mfe na RSS belụsọ ma ịnwere 1 na 1 faili ntanetịime.
A na-agụkarị RSS na ntanetị, ebe HTML email ọdịnaya ọtụtụ sliced ​​n'ime ogidi. Ndị mmadụ na-enwe ike i scanomi RSS site na elu ala, isiokwu na-agụ, isiokwu na ihe mgbọ - na-esi ngwa ngwa na-esi na nri gaa nri. Ihe odide RSS anaghị enwekarị 'n'elu atụrụ' ka onye na-achọ nlebara anya n'ihi na ndị folks ga-eji ọ scrollụ gbadaa ogologo ya. Maka email, ọdịnaya nke ga-adọta uche gị kwesịrị ịdị na-ele anya tupu onye na-agụ gị hichapụ email ahụ.
RSS bụ mbipụta, ebe a na-emeso email dị ka ihe omume na ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa email na-ewepụta email kwa izu, ọ na-adịkarị gị ịnweta nsụgharị 52 nke email ahụ - otu maka izu ọ bụla. Ọ bụrụ na mmadụ kwenye na ndepụta RSS, ọdịnaya kwesịrị ịgbanwe ma ọ bụghị adreesị ndepụta. A na-echekwa ọdịnaya ochie na ọ dịghịzi adị ozugbo ebipụtara ọdịnaya ọhụrụ.
SMS (obere ozi site na ekwentị gị) bụ a dị iche iche na-ajụ. SMS nwere ikike iso ndị mmadụ na-emekọ ihe yana ịkwanye ha ọdịnaya. Nke ahụ dị nnọọ iche na RSS na email. Ndị na-ere ahịa ga-edozi otu ha ga - esi mee ike na adịghị ike nke onye ọ bụla - ma na oyiri, usoro, ikike, na nnyefe. Enwere ọtụtụ ohere iji bulie mbọ nkwukọrịta gị - ma enwere ọtụtụ ohere ịhapụ akara ahụ!